/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); လင္းဦး(စိတ္ပညာ) _ Lin Oo: ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဘယ်သူေတွ ေအာင်ပွဲဆင်နိုင်မလဲ ?
ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဘယ်သူေတွ ေအာင်ပွဲဆင်နိုင်မလဲ ?
Labels: Tag, သိသမျှ, အြမင်များ
၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားြပိုင်ပွဲကို ဇွန်လ (၁၁) ရက်ေန့မှစ၍ ေတာင်အာဖရိကနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခံကာ ကျင်းပေတာ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ပွဲစဥ်များကို ဇွန်လ (၁၁) ရက်ေန့မှ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်ေန့အထိ ကစားမှာြဖစ်ြပီး၊ ဗိုလ်လုပွဲစဥ်ကို ဇူလိုင် (၁၁) ရက်ေန့ ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်ြမိုှု့ရိှ Soccer City ကွင်းမှာ ကျင်းပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ သမုဒ္ဒရာပိုင်းဇုန်မှ ၃ သင်း၊ အာရှဇုန်မှ ၄ သင်း၊ ေတာင်အေမရိကဇုန်မှ ၅ သင်း၊ အာဖရိကဇုန်မှ ၆ သင်း၊ ဥေရာပဇုန်မှ ၁၃ သင်း၊ စုစုေပါင်း ၃၂ သင်း ပါ၀င်ယှဥ်ြပိုင်မှာြဖစ်ြပီး၊ တစ်အုပ်စုကို ၄ သင်းအြဖစ် ၈ အုပ်စုခွဲကာ ယှဥ်ြပိုင်ြကမှာပါ။
ေတာင်အာဖရိကနိုင်ငံဟာ အိမ်ရှင်အြဖစ် ကျင်းပဖို့အတွက် အာဖရိကနိုင်ငံများြဖစ်ေသာ အီဂျစ်၊ လစ်ဗျား-တူနီရှား၊ ေမာ်ရိုကိုတို့ အြပိုင်ယှဥ်ြပိုင်ခဲ့ြကရာမှာ ေတာင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာ အားလံုးထက် မဲအြပတ်အသတ်ြဖင့် အနိုင်ရရိှကာ အိမ်ရှင်အြဖစ် ကျင်းပခွင့်ရခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။
အဂင်္လန်၊ ဘရာဇီးလ်၊ ဩစေတးလျား၊ အာဂျင်တီးနား၊ ဂျာမနီ၊ ြပင်သစ်၊ စပိန်နှင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလားကို ရယူခဲ့ေသာ အီတလီ အသင်းတို့ဟာ လက်ရိှ ေရပန်းအစားဆံုး အသင်းများ ြဖစ်ြကပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် ကျွန်ေတာ်ြကိုက်နှစ်သက်တဲ့ ၊ စိတ်ထဲကေန အမှတ်ြပည့်ေပးေနတဲ့ အသင်းနှစ်သင်းရိှပါတယ် --- ြပင်သစ်အသင်းနဲ့ Euro 2008 ဖလားကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သူ စပိန် အသင်းတို့ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့နှစ်သင်းထဲကမှ စပိန်အသင်းကို ပိုြပီး သေဘာကျသလို တစ်ေပးထားတယ်။
အြခားေရပန်းစားေနတဲ့ အသင်းများြဖစ်ြကတဲ့ အဂင်္လန်တို့၊ ဘရာဇီးလ်တို့ကို ဘာလို့များ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ နံပါတ်တစ် မေပးခဲ့လဲဆိုေတာ့ ၎င်းအသင်းများဟာ အရမ်းေကာင်းလွန်းအားြကီးြပီး ကမ္ဘာေကျာ်ကစားသမားများ အလွန်များြပားစွာ ပါ၀င်ေနေသာ်လည်း စုစည်းညီညွတ်မှုရိှရိှ မကစားနိုင်လို့ပါပဲ။
၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလား Website မှာ vote results ကို သွားြကည့်မိေတာ့ ဩစေတးလျအသင်းဟာ ပထမ ေနရာေရာက်ေနြပီး၊ စပိန် ဒုတိယ၊ အာဂျင်တီးနား တတိယ၊ ဘရာဇီးလ် စတုတ္ထနဲ့ အဂင်္လန် ပဥ္စမဆိုြပီး အသီးသီး မဲများ ရရိှေနတာကို ေတွ့ရပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ြကိုက်တဲ့ စပိန်အသင်းဟာ ေတာ်ေတာ်များများကလည်း ဖလားရနိုင်တဲ့ အသင်းအြဖစ် သတ်မှတ်ထားတာကို ေတွ့ရေတာ့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
ဒါကေတာ့ ကမ္ဘာ့ဖလားြပိုင်ပွဲေတွ ကန်မယ့် ေတာင်အာဖရိကရဲ့ ကွင်း ၁၀ ကွင်းပါ။
ဒါကေတာ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ဖွင့်ပွဲနှင့် ေနာက်ဆံုးဗိုလ်လုပွဲကို ကျင်းပမယ့် ပရိသတ် ၉၄၇၀၀ ဦး ၀င်ဆံ့တဲ့ ဂျိုဟန်နက်စဘတ်ြမိုှု့မှာရိှတဲ့ Soccer City ကွင်းပါပဲ။
အသင်းစည်းလံုးညီလွတ်မှု Team Work ေကာင်းဖို့ရယ်၊ ြပီးေတာ့ Finishing လို့ေခါ်တဲ့ အဆံုးသတ် ေသချာမှုတို့ရယ်ဟာ တစ်သင်းနဲ့ တစ်သင်းရဲ့ အားနည်းချက် အားသာချက်ြဖစ်ြပီး ဒီအချက်ေတွကပဲ ဖလားရဖို့အတွက် အနီးစပ်ဆံုးပါပဲ။ ကဲ ဘာပဲေြပာေြပာ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ စပိန်အသင်းကို အားေပးလိုက်ြပီဗျာ။
လက်ရိှ စပိန်အသင်းရဲ့ ြပိုင်ပွဲ၀င် လူစာရင်းပါ။
စပိန်အသင်းရဲ့ အားထားရသူေတွလို့ ေြပာရတဲ့ ဖာဖရီဂတ် နဲ့ ေဒးဗဒ်ဗီလာ တို့ဟာ အြခားအသင်းေတွကို ြခိမ်းေြခာက်မှု အေပးနိုင်ဆံုး အတွဲပါပဲ။ ယူရို ၂၀၀၈ ကတည်းက အားလံုးဟာ သူတို့အတွဲကို သတိထားမိလာြကြပီး အသင်းေတာ်ေတာ်များများက လိုချင်ခဲ့ြကပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဘာစီလိုနာဟာ ေဒးဗဒ်ဗီလာကို ပိုင်ဆိုင်သွားြပီြဖစ်တဲ့အတွက် အာဆင်နယ်မှာ ရိှေနတဲ့ ဖာဖရီဂတ်ကို လိုချင်ေနတာပါ။ ထိုနည်းလည်းေကာင်းပဲ ယူရို၂၀၀၈ ြပီးကတည်းက အာဆင်နယ်ဟာလည်း သူ့အသင်းမှာ ဖာဖရီဂတ်ရိှေနတဲ့အတွက် ေဒးဗစ်ဗီလာကို လိုချင်ေနခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ သူတို့နှစ်ေယာက်အေပါ် အသင်းြကီးေတွရဲ့ အေလးထား လိုချင်မှုေတွပါပဲ။ အခု ချစ်ြကည်ေရးပွဲေတွမှာဆိုလည်း ေဒဗစ်ဗီလာဟာ အဆံုးသတ်ေသချာမှုေတွနဲ့အတူ အသင်းအတွက် အနိုင်ဂိုးေတွကို သွင်းယူေနပါတယ်။
ဒါေြကာင့် ဘယ်သူဘာေြပာေြပာေန ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ စပိန်အသင်းကိုပဲ တစ်ေပးလိုက်ပါတယ်။ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်ခဲ့ရင်ေတာ့ ေဘာလံုးက လံုးေနတာလို့ပဲ ဆင်ေြခ ေပးလိုက်ဖို့ပဲ ရိှပါေတာ့တယ်။
( ကိုေအာင် (ပျူနိုင်ငံ)မှ Tag လာတဲ့ Tag Game တစ်ခုပါ။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ အြမင်ေတွနဲ့အတူ ေဆာင်းပါးအြဖစ် တင်ြပလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့် ေရးသားချက်များဟာ တစ်ဖက်သက် ဆန်နိုင်ပါတယ်။ )
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Tuesday, June 01, 2010
ေက်းဇူးပါ ကုိလင္းဦးေရ၊ ကုိလင္းဦး ခန္႕မွန္းသလုိ စပိန္အသင္း ကမၻာ့ဖလား
က်ေနာ္လည္း ဒီႏွစ္ စပိန္အသင္းကိုပဲ ရေစခ်င္ေနတာ။
Carlos Puyol တစ္ေယာက္က လြဲျပီး အားလံုးက ျမန္ဆန္ေနတဲ႔ လူလတ္ေတြ ျဖစ္ေနလို႔ ပိုႏွစ္သက္မိတယ္။
ျပည္႔ျပည္႔စံုစံု ေဖာ္ျပေပးလို႔ ေက်းဇူးပါ။
ကိုေအာင်သာငယ်၊ ကိုသက်ဦး၊ ကုိေဆာင်းယြန်းလ၊ ကိုသစ္နက္ဆူး၊
ကုိေက်ာ်၀ဏၰ (မမုိးခ်ုိသင်း အမ်ုိးသား)၊ အကုိြကီး ကိုခ်စ်ေဖ၊
ကိုျငိမ်းခ်မ်းေအာင်၊ ကိုလူလ၊ ကိုလူေထြး၊ ကိုအုိးေ၀ေအာင်၊
ကိုမုိး၊ ေမာင္ဖုန်းျမင့်၊ ကုိဥပသကာ၊ ကိုလင်းဦး (စိတ္ပညာ)၊(done)
ကိုေဇာ္မ်ုိးလြင်၊ ေယာနက်သန်၊ ညီမူရာ၊ ဖူးနုသစ် ၊(done)
အစိမ်းေရာင္လြင်ျပင်၊ sosegado၊ ေမာင္မ်ုိး
စပိန္ကို အရမ္းႀကိဳက္လြန္းအား ၾကီးလို႕ အခုေနာက္ပိုင္း ဘယ္ေတာ့မွ စပိန္ကို အားမေပးေတာ့ဘူး ေမွ်ာ္လင့္တိုင္း မိႈင္းမိႈင္းရီ ျဖစ္ျဖစ္သြားလို႕ဗ်ာ.. ကိုလင္းဦး မွန္းသလို ျဖစ္လာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္ၾကိဳက္ဖူးခဲ့တဲ့ အသင္း ကမာၻ႕ဖလား ခ်န္ပီယံ ျဖစ္လာတာ ဝမ္းသာရမွာေပါ့.. အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ. :))
က်ေနာ္က စပိန္ကို ၾကိဳက္ေတာ့ၾကိဳက္တယ္ ၅၀%ပဲ..